Microsoft Outlook ee mac waxay bilaabaysaa naqshadeynta "la fududeeyay", oo la mid ah dalabka barnaamijka IOS | Waxaan ka socdaa mac
Microsoft Outlook ee mac waxay bilaabaysaa naqshadeynta "la fududeeyay", oo la mid ah dalabka iOS
Majaladda caanka ah qarka u saaran ayaa soo bandhigtay faahfaahinta muuqaalka cusub ee Microsoft Outlook ee loogu talagalay Mac. Marka la eego Microsoft, tani waa aragti fududeeyey, aad ugu dhow nooca macruufka. Waxay ku habboon tahay isdhexgalka ay Microsoft ku fulineyso codsiyada Office 365, halkaasoo qaababka codsiyada isugu yimaadaan, iyadoon loo eegin barxadda ay ka yimaadeen. Microsoft waxay sameysaa nooca ugu fiican ee ay heli karaan dadka isticmaala Mac (uguyaraan ugu muuqaal badan) maadaama dad badan oo saameyn leh ay isticmaalaan macOS oo ay rabaan inay muujiyaan isdhaxgalka kumbuyuutarrada Mac.
Maqaalkan, waxaan ku heli doonnaa shaashadda shaashadda waxa Muuqaalka Mac u noqon doono.Wax kasta waxay umuuqdaan inay muujinayaan inay yeelan doonaan si buuxda u customizable bar. Dhexdeeda waxaan kuheli karnaa howlaha ugu muhiimsan, kuwa aan dooneyno inaan isla markiiba helno, qaab marin toos ah. Waxaan u dhaqaaqeynaa sadarka bidix. Marka hore waxaan heli doonaa xisaabaadka kala duwan: shaqsi, shaqo, koontada labaad, iwm. iyo xagga hoose ee helitaanka caadiga ah: boostada, kalandarka, xiriirada, xusuusinta iyo qoraalada. Astaamuhu waxay ina xusuusinayaan inbadan oo kamid ah kuwa lagu arkay arjiga macruufka.
Si aad u soo gabagabeyso la interface ah, tus in aad heshay hagaajinta jadwalka weyn. Hada maaraynta balamaha way dhib yartahay, mahadnaq fiican awgeed.
Laakiin isbeddellada kuma dhacaan kaliya lakabka koowaad. Gudaha gudihiisa sidoo kale waxaa laga helaa isbeddelo. The raadinta ayaa ka dhakhso badan iyo wixii ka sarreeya oo dhan oo sax ah. Intaa waxaa dheer, sanduuqa raadinta wuxuu kasbaday marin u helid, maadaama uu hadda ku yaal isla booska Mail ama Finder ee macOS, dhinaca midigta sare.
Qaybta taban ayaa ah in xilligan aan ku harno rabitaanka ah inaan isku dayno macmiilkan iimaylka ah ee la hagaajiyay, maxaa yeelay shirkaddu ma bixin faahfaahinta daah-furka. Ahmiyada shirkadu waa iskumidnaanta barnaamijka udhaxeeya barnaamijyada kaladuwan waana ku dhex milmeen tan. Waqtigaan la joogo, isticmaaleyaasha Mac-da waxay ku qasban yihiin inay xalliyaan hagaajinta mustaqbalka, sida tirtiridda emaylka, ka leexashada baarka farriinta iyo hawl ah in lagu daro miisaska emayllada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Microsoft Outlook ee mac waxay bilaabaysaa naqshadeynta "la fududeeyay", oo la mid ah dalabka iOS
Ku takhasus shabakadahaaga bulshada Shaybaarka Warbaahinta Bulshada, hadda iib ah
Apple wuxuu bilaabayaa beta seddexaad ee tvOS 11.1 iyo watchOS 4.1